ကြက်သား နှင့် ကြက်အူချောင်း ပီဇာ | Wutyee Food House
January 2, 2010 by chowutyee ကြက်သား နှင့် ကြက်အူချောင်း ပီဇာ
၄။ နို့မှုန့်- စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ရေ၊ yeast၊ နို့မှုန့်၊ ဂျုံ ၊ ဆား ရောပြီး သမအောင်နုယ်ပေးပါ။ ရေများသွားပါက ဂျုံထပ်ထည့်ပေးပါ။
၂။ ၁၀မိနစ်ခန့် ထားပြီးမှ ဆီထည့်နုယ်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ဂျုံဒိုးံကို ထလိမ့်တုံးနှင့် အပြား ၁၀လက်မလောက် ရောက်အောင် လိပ်ပေးပါ။
ကြက်သား ပီဇာအတွက် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
၁။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၅ကျပ်သား (ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီး အမျှင်နွင်းပါ)
၃။ ပြောင်းဖူး – ၁ဖူး (ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီး ခြွေပါ)
၃။ ပြီးလျှင် ဒိုးပေါ်တွင် ကြက်သား ပီဇာအတွက် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများကို ထည့်ပါ။
၄။ အရင်ဆုံး ကြက်သွန်နီ အ၀ိုင်းထည့်ပါ ပြီးမှ အစဉ်လိုက် (ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်သီးပွ၊ ကြက်အူချောင်း၊ ကြက်ရင်ဗုံသား၊ ပြောင်းဖူး) အစဉ်လိုက် စီကာ ထည့်ပေးပါ။
Posted in ပီဇာ ဖုတ်နည်း | 22 Comments	22 Responses
on January 3, 2010 at 12:21 pm | Reply hmone gyi
look very nice but ko cook ma bae eat ya top mar ma lote tae loe🙂
on January 5, 2010 at 8:06 am | Reply chowutyee
ုကိုယ်ကလည်း ပီဇာ ဖုတ်တာ ထင်သလောက် မခက်ပါဘူး ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပေါ့
on March 9, 2011 at 5:12 pm hnin phyu
thz u so much ma wut yee …🙂 because of I can make it … that is the nice taste😉
on January 17, 2010 at 4:49 am | Reply Raven
ha ha … good … good … i will try once i have the oven.
on January 17, 2010 at 10:09 am | Reply chowutyee
ကိုကျော်ဇော်လင်း လုပ်ကြည့်ပြီးရင် ပြန်ပြောအုန်းနော်….
on March 22, 2010 at 12:24 am | Reply leo
မ၀တ်ရည်ရေ.. pizza ဖုတ်တဲ့ အချိန်က နည်းနည်း များနေတယ်နဲ့တူတယ်နော်။ အပူချိန်က ၂၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ အားလုံးကြာချိန်က ၃၀ မီးနစ်ဆိုတော့ တူးများ သွားမလားပဲ။ သေချာလေး ပြန်ကြည့်ပေးပါအုံး။
နောက် ဂျုံက ၃၀ ဂရမ်ဆိုတော့ ရေက ဘယ်လောက်ထည့်ရမှာ လဲဗျ။
yeast ထည့်တာလဲ နည်းနည်း များမယ်ထင်တယ်။ အချိုးအစားတွေကိုပြန်စစ်ပေးပါလား။ ကျေးဖူးပါ။
on March 22, 2010 at 4:19 am | Reply chowutyee
– အပူချိန် ၂၀၀ ဒီဂရီကို ဒိုးကို မိနစ်၂၀ဆိုတာ preheat လုပ်တဲ့ အချိန်ပါ ထည့်တွက်ပြီးရေးထားလို့ပါ… preheat လုပ်ပြီးမှ စရေရင် ဒိုးကို ၁၀မိနစ် + အစာပလာထည့်ပြီး ဖုတ် ၁၀မိနစ် ဆိုတော့ မိနစ် ၂၀ထဲပါ.. ရေးထားတာ လိုသွားလို့ ပြန်ပြင် ရေးထားပါတယ်..း)
– ပြီးတော့ ဂျုံမှုန့်က ၃၀ဂရမ် မဟုတ်ပါဘူး ၃၀၀ ဂရမ်ပါ..
– ရေကတော့ ရေသန့်တစ်ခွက် လောက်ဆို အနေတော်ပါပဲ… ဂျုံအနေထား မမာမပျော့ အနေထားရရင် ရပါပြီး.. ဂျုံကို နာနာနုယ်ပေးလျှင် ဒိုးပိုကောင်းလေပါပဲ..
– yeast ကတော့ အများအားဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းပဲထည့်ကြတယ်.. ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည်က ပိုပွစေချင်လို့ ၂ဇွန်းထည့်ထားတာပါ။
– တချို့လိုအပ်မယ်ထင်တာလေ တွေ ပြန်ပြင် ရေးထားပေးပါတယ်နော်..
– ပြီးတော့ ဒီပီဇာဖုတ်နည်းက တခြားသူတွေနဲ့ နည်းနည်းတော့ တူချင်မှတူမယ်..
– ၀တ်ရည် စိတ်ကြိုက်ဖုတ်ထားတဲ့ နည်းပါ။ ၀တ်ရည် ပီဇာက အမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာတော့ နံမည်ကြီးပဲ ကောင်းလို့ဆိုပြီး.. hee ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်စားကြည့်ပါ၊ အရသာ အရမ်းကောင်းတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်..း)
on March 22, 2010 at 9:40 pm | Reply leo
ကျွန်တော် လုပ်တဲ. Pizza နဲ.တော. ကွာခြားမှု.တွေရှိနေလို.ပြောတာပါ ၀တ်ရည်ရဲ.ပြုလုပ်ပုံလေးကလဲးကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်ကတော. ဟိုတယ်မှာလုပ်ရောင်းရတာဆိုတော. အချိန်ကိုမြန်မှဖြစ်မှာလေ Pizza တစ်ပွဲးကို ဒိုးအဆင်သင်.လုပ်ပြီးသာ ကို ၅ မိနစ်နဲ. အကျက်လုပ်ပေးရတာ ကြာနေရင် Italian Chef က ပြောတာ အီတလီမှာလုပ်စားရင် မင်.ဆိုင်က ဓျေးဦးတောင်မပေါက်ဘူး လူတွေပြန်သွာလိမ်မယ်လို.အဆူခံရလို.ပါ တစ်နေ.ကို Pizza က Dinner အချိန်မှာ ပွဲး ၆၀ ကျော်တယ် အမြန်လုပ်ပေးရတာ။ ၀တ်ရည်နဲ. တစ်နေ.တစ်ချိန်မှာများ တွေ.ဆုံခွင်.ရရင် အကောင်းဆုံ Pizza နဲ. အကောင်းဆုံး Italian Food တွေကိုချက်ကျွေးခြင်ပါတယ် ။
on March 23, 2010 at 1:49 am | Reply leo
ဟ…နာ့ဆရာ..နာ့ကို လုပ် သွားပြန်ပြီ…။ မ၀တ်ရည်ရေ..အဲ့ဒါ သားသား ဟုတ်ဘူး..သားရဲ့ ဆရာပါ။ ဗွေ မယူပါနဲ့ဗျာ..။ ဟီးးးးး
ဆရာ ခို ..သား ကို မျက်နှာပျက်အောင် လုပ်နဲ့နော်….။း)
on March 23, 2010 at 7:06 am | Reply chowutyee
ဟားဟား ကိစ္စမရှိပါဘူး Leo… ဆရာခိုက အီတလီ အစားအသောက်တွေ ချက်ကျွေးချင်တယ်ဆိုလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်နေတာပါ… အခွင့်အရေးရရင် စားရချည်သေးရဲ့..း)
on April 6, 2010 at 1:25 pm | Reply July
thank u wut yee yay… ama lae pizza lote sarr chin lo win shar lite tar…ataw pae…😀
on April 6, 2010 at 1:50 pm | Reply chowutyee
Plz try ma July.. Pizza is really good taste!!🙂
on September 24, 2010 at 9:13 am | Reply Htet
မ၀တ်ရည်ရေ..Yeast အစား soda ထည့်လို့ ရမလား သိချင်လို့ ပါ..မြန်မာပြည်မဟုတ်တော့ လိုချင်တာ သိပ်မရှာတတ်လို့ ပါ…
on September 25, 2010 at 4:50 am | Reply chowutyee
Htet ရေ Yeast ကိုပါမုန့်တို့၊ ပီဇာတို့ ဖုတ်လျှင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာမို့ yeast ပဲထည့်စေချင်ပါတယ်။ baking yeast လို့ ဘယ် Supermarket မှာမဆိုပြောဝယ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်…🙂
on September 26, 2010 at 12:49 pm | Reply Htet
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီး မေးဝယ်ကြည့်ပါ့မယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မ၀တ်ရည်ရှင့်..
on April 5, 2011 at 9:52 am | Reply SU
on April 5, 2011 at 9:54 am | Reply SU
sorry…ama baking powder yaw use lo ya par lar??baking powder n baking yeast bar kwar bar lae??pls tell me ma..thanks..
on November 2, 2011 at 5:06 am | Reply မိုးမိုး
on March 15, 2012 at 10:17 pm | Reply usai
Please explain what is #ရ။ ချိပ် . Where can I find it ?
sorry it is cheese! you can find any market place!😀
[…] January 2, 2010 ကြက်သား နှင့် ကြက်အူချောင်း ပီဇာ […]
on May 25, 2012 at 7:49 am | Reply yoeyoe
သင်္ကြန်တွင်းက မ၀တ်ရည်ရဲ့ နည်းလေးနဲ့ ပီဇာလုပ်စားဖြစ်ပါတယ် .. အရမ်းစားကောင်းတာပဲ.. ခေါက်မုန့်လုပ်နည်းလေးအဆင်ပြေရင်ပြောပြပါဦးနော်..
မ၀တ်ရည်ရဲ့ ပရိတ်သတ်အသစ်ပါ ..